China Cylindrical Fuse Links vagadziri uye vanotengesa | Mersen
Kudzivirirwa pakuwandisa uye pfupi pfupi mumatambo emagetsi (mhando gG), inowanikwawo kuchengetedza masemiconductor zvikamu uye zvishandiso kurwisa pfupi-dunhu (mhando aR) uye kuchengetedzwa kwemamota (mhando aM) .Rated voltage kusvika ku690V; Rated parizvino kusvika 125A; Kushanda frequency 50Hz AC; Yakatemerwa kutyora chinzvimbo kusvika ku100kA, Inoenderana neGG 13539 uye IEC 60269.
Iyo mienzaniso. zviyero, zviyero zvinoratidzwa muMifananidzo 1.1 ~ 1.4 uye Tafura 1.
Pashure: Bolt Yakabatanidzwa Fuse Links